Seza fisakafoana, seza, latabatra fisakafoana, seza plastika, seza Pu - Forman
Tianjin Forman Furniture dia orinasa mitarika eo avaratr'i Sina izay natsangana tamin'ny taona 1988 izay manome seza sy latabatra fisakafoana.
Ny fizarana tsena dia 40% any Eropa, 30% any USA, 15% any Amerika atsimo, 10% any Azia, 5% any amin'ny firenen-kafa.
Forman dia manana ekipa mpivarotra lehibe miaraka amina mpivarotra matihanina mihoatra ny 10, manambatra ny fomba fivarotana an-tserasera sy ivelan'ny Internet, ary mampiseho hatrany ..
Seza ankizy 1720-ankizy #
Ny endrika dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Ny seza dia vita tamin'ny akora polypropylene tia tontolo iainana. Ity seza ity dia matetika ampiasaina any anaty trano, ary azo ampiasaina ivelan'ny trano miaraka amin'ny fitaovana unti-UV sy ny vovoka vovoka ivelany. Satria malefaka ny endrik'ilay plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka.
Seza ankizy 1719-Ankizy #
Ny seza fisakafoanana dia avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny tany ihany, ity seza tahaka ny sampana ity dia manampy singa tony mahafinaritra amin'ny toerana rehetra. Ny sezany miorina amin'ny plastika matanjaka dia misy endrika volavola haingo ho an'ny rivotra mangatsiaka maoderina, mety tsara amin'ny lakozia, birao, na patio.
Seza ankizy 1619-ankizy #
Ny seza Namboarina tamin'ny vy sy hazo, ny vatan'ny tsangambato dia miforitra amin'ny tongony mifamatotra amin'ny alàlan'ny vatan'ny crisscrossing miaraka amin'ny tongotra boribory. Ny seza siny plastika dia mampifamatotra azy rehetra, mampiseho ny lokony matevina. Ny seza sandry dia vita amin'ny akora polypropylene tia tontolo iainana tany am-boalohany rakotry ny lamba. Satria malefaka ny endrik'ilay plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka.
Seza an-jaza, seza kely 1618-ankizy #
Ny andiana maoderina dia manampy fiangaviana amin'ny toerana ipetrahan'ny zanakao. Ny seza eran-tany dia manana endrika miverina miolakolaka ho an'ny fampiononana tsara indrindra. Ny seza dia vita amin'ny akora polypropylene mpiorina tontolo iainana ary ny tongotra vita amin'ny vatan-kazo matanjaka satria malefaka no asehon'ny Plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka.
Latabatra fisakafoana T-55 #
Ity latabatra fisakafoana ity dia singa iray mpanangona zavatra betsaka amin'ny sehatra samihafa, na any an-trano izany, na any amin'ny birao, eny fa na dia any ivelany aza. Manome velarantany malalaka ho an'ny kafe sy dite, famakiana atoandro, fiasana, fampisehoana vaza sy zavamaniry tianao indrindra, ary ny fanilihana ny fantsonao lavitra.
fitaratra tampon'afo ambony vato ambony marbra dini ...
Ny latabatra marbra dia mifanaraka amin'ny fianakaviana kely satria afaka manohitra ny lalàna mahomby izy ireo, tsy mora maloto ary tsy misy rano manimba ny latabatra toy ny hazo. Ny latabatra fihinana ranomandry dia mora amin'ny alàlan'ny firafitry ny vato amin'ny vato ary mandritra ny fizotrany, ny latabatra nohosorana ary ampiasaina handrakofana ny asa fanoherana ny fandotoana, hanadio haingana kokoa noho ny hatramin'izay. Ny latabatra faran'izay fetsy dia ny latabatra namboarina miaraka amina asa maro, izay mety misy latabatra, latabatra dite na latabatra, Mba hitondrana ...
Latabatra fisakafoanana T-15
Ny latabatra fisakafoana boribory ambony natao manokana ho an'ny fianakaviana kely dia hanome endrika mahazatra ny tranonao. Ity latabatra fisakafoanana tsotra ity dia afaka mihazona olona efa-efatra noho ny refy kely fa izany no mahatonga azy ho mpahay maso manokana sy tena izy. Ny latabatra boribory dia mitondra ny olona ho akaiky kokoa ka aza adino ny fotoana handany fotoana mahafinaritra indrindra miaraka amin'ny fianakaviana na namana. Namboarina tamin'ny MDF mateza sy tongotra vy miampita amin'ny pads eo ambanin'ny tsirairay mba hiarovana ny gorodonao amin'ny fikororohana, mety ho gett ...
Latabatra fisakafoanana T-15L
T-15L: fiarovana azo antoka boribory boribory, MDF fitaovana birao mateza, endrika kanto.
Seza plastika 1666-ankizy #
Ny endrika dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Ny seza dia vita tamin'ny akora polypropylene tia tontolo iainana tany am-boalohany, ny vatan'ny tongony vy dia azo kosehina vovoka na nafindra hazo. Ity seza ity dia matetika ampiasaina any anaty trano, ary azo ampiasaina ivelan'ny trano miaraka amin'ny fitaovana unti-UV sy ny vovoka vovoka ivelany. Satria malefaka ny endrik'ilay plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka.
Seza plastika - F803 #
Fipetrahana ahazoana aina sy fototra mafy orina hahatonga ity seza plastika ity ho lasa fampiasa amin'ny efitrano fisakafoana, efitrano fandraisam-bahiny na lakozia. Ny seza mitsivalana dia manome fanohanana betsaka amin'ny alàlan'ny akorany lalina sy ireo sandry ambony. Ny tongotra dia mivelatra hamorona fotony midadasika, manatsara ny fitonian'ny seza ary mamorona endrika voalanjalanja sy simetrika.
Seza plastika-BV #
Mikasika ity seza plastika ity, ny firafitr'i KD rehetra dia teboka maivana, fonosana kely dia kely izay mety amin'ny varotra an-tserasera. Ny seza dia vita amin'ny fitaovana polypropylene tia tontolo iainana tany am-boalohany, miaraka amina endrika am-boalohany sy kanto, izay tsy afaka jerena amina safidy maro loko sy maro loko ho an'ny fanovozan-kevitrao.
Seza fisotroana plastika- 1780 #
Ny endrika dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Ny seza fisotroana dia vita amin'ny akora polypropylene miaro tontolo iainana. Safidy miloko amin'ny safidinao. Ity seza fisotroana ity dia mazàna ampiasaina any anaty trano, ary azo ampiasaina ivelan'ny trano. Satria malefaka ny endrik'ilay plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka.
Seza plastika 1681 #
Ny endrika dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Omeo seza maoderina amin'ny fety na hetsika tsy mahazatra miaraka amin'ireo seza ireo. Mety ho an'ny fisakafoanana anaty trano na fampiasana ivelany, ireo seza ireo dia mora azo apetaka amin'ny fitehirizana sy fitaterana haingana. Ny seza dia vita tamin'ny akora polypropylene tia tontolo iainana tany am-boalohany, ny vatan'ny tongony vy dia azo kosehina vovoka na nafindra hazo. Safidy miloko amin'ny safidinao. Ity seza ity dia matetika ampiasaina any anaty trano, ary azo ampiasaina ivelan'ny trano miaraka amin'ny fitaovana unti-UV sy ny vovoka vovoka ivelany ....
Forman dia ozinina mitarika izay mifantoka hatrany amin'ny famolavolana tany am-boalohany. Ampirisiho fatratra ity seza sofa ity, mampahazo aina tokoa ny mipetraka na matory amin'ny ondana malefaka. Miaraka amin'ny plastika sy plastika PP, feno fahatsapana lamaody izy ary matanjaka ampy hanohanana farafaharatsiny 150kgs entana. Azonao atao ny mametraka azy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao mba hankafizanao ny fiainanao mahafinaritra! misy loko misy, miandry ny fanontanina anao!
Seza fisakafoana plastika Shelly #
Ny endrika dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Satria malefaka ny endri-javatra amin'ny plastika PP, ho hitanao fa tena ahazoana aina ny mipetraka. Namboarina tamin'ny fomba minimalista maimaim-poana, manambatra ireo singa fototra amin'ny endrika maoderina miaraka amin'ny seza malala-tanana ary ny backrest miorina amin'ny paikady tsara toerana. feno stackable, tonga mivory tanteraka, ary miaraka amin'ny tsy m ...
ambongadiny plastika misy chai plastika ...
Mpanamboatra za-draharaha izahay. Fandresena ny ankamaroan'ny mari-pankasitrahana lehibe eo amin'ny tsenany ho an'ny Factory manome avy hatrany ny sisin'ny seza an-tsisin'i China ...
Ny trano fisakafoanana any Denver dia lasa mamorona amin'ny di ...
Androany dia misy fomba maro handravahana trano amin'ny fanaka ivelany ho an'ny endrika tsy manam-paharoa. Na ny décor aziatika na tandrefana no tianao kokoa dia mety mifanelanelana ...